Ny Vivo NEX dia havoaka ivelan'i Sina amin'ity volana ity | Androidsis
Hanomboka hanomboka iraisam-pirenena ny Vivo Nex amin'ity volana ity
Tamin'ny volana lasa dia nahafantatra ilay fianakaviana telefaona Vivo NEX vaovao izahay. Io no avo lenta farany an'ny mpamokatra sinoa, izay midika fiakarana avo lenta amin'ny kalitao. Ho fanampin'ny mahagaga amin'ny endriny sy ny fakantsary. Efa natomboka tany Sina ny telefaona, saingy mbola miandry ny famoahana azy ny any ivelan'ny firenena. Soa ihany fa tsy ho ela ny fiandrasana.
satria Ity volana jolay ity ihany dia manomboka ny fanombohana iraisam-pirenena ny Vivo NEX. Ka antenaina fa mandritra ny volana vitsivitsy ho avy dia hanomboka mahatratra tsena vaovao ny telefaona.
Tsena maromaro any Azia no voalohany hividy an'ity Vivo NEX ity. Hatreto dia voamarina ao ny Russia, India, Malezia, Hong Kong ary Taiwan. Fandefasana izay antenaina hanomboka amin'ity volana jolay ity, amin'ny tapany faharoa amin'ny volana.
Any amin'ny sasany amin'ireo firenena ireo dia antenaina fa azo atao ny mividy telefaona manomboka amin'ny 19 Jolay. Tena fohy tokoa ny fiandrasana. Izy ireo no voalohany nahazo ny alàlan'ny telefaona, na dia toa tsy izy ireo aza no ho farany. Saingy ny orinasa mihitsy tsy milaza na inona na inona momba izany.
Tsy fantatra na azo vidiana na tsia any Eropa ity Vivo NEX ity. Ny marika dia tsy manana fanatrehana ofisialy amin'ny kaontinanta. Fa raha misy telefaona izay tokony hanandraman'izy ireo hiditra amin'ity tsena ity dia tsy misy isalasalana fa ity maodely ity. Ka manantena izahay fa handre bebe kokoa momba ny drafitrao ato ho ato.
satria Mampanantena ity Vivo NEX ity fa iray amin'ireo telefaona be mpiresaka indrindra amin'ny taona amin'ny Android. Ary mahamenatra raha fitaovana iray nanao risika sy nitady hanolotra zava-baovao, no sisa tavela amin'ny tsena sasany any Azia. Ahoana ny fahitanareo ny telefaona?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Hanomboka hanomboka iraisam-pirenena ny Vivo Nex amin'ity volana ity
Samsung dia mahatratra an'i Apple ao amin'ny tsenan'ny orinasa Netherlands